Ankatoavy Ireo Mpiandry Notendren’i Jehovah | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Aoka ianareo hankatò sy hanaiky an’ireo mitarika eo aminareo, fa izy ireny miaro anareo hatrany.” —HEB. 13:17.
Inona avy no ataon’ny anti-panahy mba hiandrasana ny ondrin’Andriamanitra?
Nahoana ny ondry no tokony hankatò an’ireo mpiandry lefitra?
Nahoana isika no mila mankatò foana ny torohevitra ara-baiboly omen’ny anti-panahy, na dia tsy lavorary aza izy ireo?
1, 2. Nahoana i Jehovah no mampitaha ny tenany amin’ny mpiandry ondry?
MAMPITAHA ny tenany amin’ny mpiandry ondry i Jehovah, ary manampy antsika hahalala azy izany. (Ezek. 34:11-14) Tsapan’ny mpiandry ondry be fitiavana fa andraikiny ny miaro ny ain’ny ondry sy mitady izay hahasoa azy ireo. Mitondra azy ireo eny amin’ny toerana misy ahi-maitso sy rano izy (Sal. 23:1, 2), miambina azy ireo andro aman’alina (Lioka 2:8), miaro azy ireo amin’ny bibidia (1 Sam. 17:34, 35), mitrotro ny ondrikely vao teraka (Isaia 40:11), ary mitady ny ondry very sy mikarakara tsara an’ireo maratra.—Ezek. 34:16.
2 Mpamboly sy mpiandry ondry ny ankamaroan’ny vahoakan’i Jehovah fahiny, ka azony tsara rehefa nampitaha ny tenany tamin’ny mpiandry ondry be fitiavana i Jehovah. Fantatr’izy ireo fa nila nokarakaraina tsara ny ondry mba ho salama. Toy izany koa fa mila fikarakarana ara-panahy ny olona. (Mar. 6:34) Mijaly ny olona rehefa tsy mahazo tari-dalana sy fikarakarana avy amin’i Jehovah. Lasa tsy mahalala izay tsara sy ratsy izy ireo ary tsy misy mpiaro, ka toy ny “ondry tsy misy mpiandry.” (1 Mpanj. 22:17) Be fitiavana anefa i Jehovah, ka manome izay ilain’ny vahoakany.
3 Azontsika tsara koa ankehitriny hoe nahoana i Jehovah no toy ny mpiandry ondry. Mbola mikarakara tsara ny vahoakany izy hatramin’izao. Hodinihintsika izao hoe ahoana no itarihan’i Jehovah ny ondriny sy anomezany azy ireo izay ilainy, ary inona no tokony hataon’izy ireo ho setrin’izany.
NANENDRY MPIANDRY LEFITRA ILAY MPIANDRY TENA TSARA
4. Inona no ataon’i Jesosy ho an’ny ondrin’i Jehovah?
4 Nanendry an’i Jesosy ho Lohan’ny fiangonana kristianina i Jehovah. (Efes. 1:22, 23) “Mpiandry tena tsara” i Jesosy ary manahaka ny Rainy. Tena tia an’ireo ondry izy ary mikarakara azy ireo. ‘Nahafoy ny ainy ho azy ireo’ mihitsy aza izy. (Jaona 10:11, 15) Fanomezana tena tsara ho an’ny olombelona ny sorom-panavotan’i Kristy. (Mat. 20:28) Ny sitrapon’i Jehovah dia hoe “tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana” an’i Jesosy, “fa hanana fiainana mandrakizay.”—Jaona 3:16.
5, 6. a) Iza no notendren’i Jesosy hikarakara ny ondriny, ary inona no tsy maintsy ataon’ny ondry? b) Inona no tokony ho antony lehibe indrindra hankatoavantsika ny anti-panahy?
5 Ahoana kosa no ataon’ny ondry tarihin’i Jesosy Kristy, ilay Mpiandry Tena Tsara? Hoy i Jesosy: ‘Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy.’ (Jaona 10:27) Ny hoe mihaino ny feon’ilay Mpiandry Tena Tsara dia midika hoe manaraka ny tari-dalany foana. Anisan’izany ny hoe mankatò an’ireo notendreny ho mpiandry lefitra. Nilaza i Jesosy fa hanohy ny asa natombony ny apostoly sy ny mpianany, ka ‘hampianatra’ sy ‘hamahana ny ondrikeliny.’ (Mat. 28:20; vakio ny Jaona 21:15-17.) Nataon’i Jesosy izay hisian’ny Kristianina matotra hiandry ny fiangonana, rehefa niely ny vaovao tsara ary nihabetsaka ny mpanara-dia azy.—Efes. 4:11, 12.
6 Nilaza tamin’ny anti-panahin’i Efesosy ny apostoly Paoly fa ny fanahy masina no nanendry azy ireo ho mpiandraikitra, ‘mba hiandrasan’izy ireo ny fiangonan’Andriamanitra.’ (Asa. 20:28) Notendren’ny fanahy masina koa ny anti-panahy ankehitriny. Mahafeno ny fepetra takina aminy ao amin’ny Baiboly mantsy izy ireo, ary avy amin’ny fanahy masina ny Baiboly. Rehefa mankatò ny anti-panahy àry isika, dia manaja an’ireo Mpiandry lehibe indrindra, izany hoe i Jehovah sy Jesosy. (Lioka 10:16) Izany no tokony ho antony lehibe indrindra hankatoavantsika ny anti-panahy. Misy antony hafa koa anefa.
7. Inona no ataon’ny anti-panahy mba hanampiana anao hifandray tsara amin’i Jehovah foana?
7 Miorina amin’ny Baiboly na ny toro lalan’ny Baiboly foana ny fampaherezana sy ny torohevitry ny anti-panahy. Tsy ny hibaikobaiko ny mpiara-manompo amin’izay fomba tokony hitondrany ny fiainany anefa no tanjon’izy ireo. (2 Kor. 1:24) Manome tari-dalana ara-baiboly kosa izy ireo, mba hanampiana antsika handray fanapahan-kevitra tsara sy mba hampisy filaminana sy fihavanana eo anivon’ny fiangonana. (1 Kor. 14:33, 40) ‘Miaro antsika’ ny anti-panahy, satria manampy antsika tsirairay mba hifandray tsara amin’i Jehovah foana. Ampian’izy ireo haingana àry izay hitany hoe mitady hanao “fahadisoana” na efa nanao izany. (Gal. 6:1, 2; Joda 22) Tsy mandrisika antsika ‘hankatò an’ireo mitarika’ antsika ve izany?—Vakio ny Hebreo 13:17.
8. Ahoana no iarovan’ny anti-panahy ny andian’ondrin’Andriamanitra?
8 Nanoratra toy izao ho an’ny rahalahy tany Kolosia i Paoly, izay anisan’ny mpiandry: “Tandremo sao hisy hahalasa anareo ho rembiny amin’ny alalan’ny filozofia sy ny famitahana poakaty araka ny fampianarana nifandovan’ny olombelona, eny, araka ny zavatra fototra eo amin’ity tontolo ity, fa tsy araka an’i Kristy.” (Kol. 2:8) Hitantsika eo ny antony iray hafa tokony hanarahantsika ny torohevitra ara-baiboly omen’ny anti-panahy. Te hiaro ny andian’ondry izy ireo, ka mampitandrina azy amin’izay mitady hanozongozona ny finoany. Nampitandrina, ohatra, ny apostoly Petera fa hisy “mpaminany sandoka” sy “mpampianatra sandoka” hanandrana ‘hitaona an’ireo olona tsy miorina tsara’ hanao ratsy. (2 Pet. 2:1, 14) Tsy maintsy mampitandrina toy izany koa ny anti-panahy rehefa ilaina izany. Kristianina matotra izy ireo, ary efa nahita fiainana. Efa hita koa hoe mahazo tsara ny Soratra Masina izy ireo talohan’ny nanendrena azy ireo, sady mahafeno fepetra hampianatra zavatra mahasoa. (1 Tim. 3:2; Tit. 1:9) Afaka manome tari-dalana tsara ho an’ny andian’ondry izy ireo, satria matotra, mahay mandanjalanja, ary manana ny fahendrena avy amin’Andriamanitra.
Miaro ny ondry eo anivon’ny fiangonana ny anti-panahy, toy ny mpiandry ondry miaro ny andian’ondry (Fehintsoratra 8)
MAMAHANA SY MIARO NY ONDRY ILAY MPIANDRY TENA TSARA
9. Ahoana no itarihan’i Jesosy sy amahanany ny fiangonana ankehitriny?
9 Mampiasa ny fandaminany i Jehovah, mba hanomezana sakafo ara-panahy tondraka ho an’ny rahalahy sy anabavy eran-tany. Mahita torohevitra ara-baiboly be dia be, ohatra, isika ao amin’ny boky sy gazetintsika. Omen’ny fandaminana tari-dalana mivantana koa ny anti-panahy indraindray, amin’ny alalan’ny taratasy na ireo mpiandraikitra mpitety faritany. Ireny rehetra ireny no manampy ny ondry hahazo tari-dalana mazava tsara.
10. Inona no andraikitry ny anti-panahy rehefa misy ondry tafasaraka amin’ny andiany?
10 Andraikitry ny anti-panahy ny miaro sy mikarakara ny ondry, indrindra fa ireo lasa malemy finoana sy ireo nanao fahadisoana lehibe. (Vakio ny Jakoba 5:14, 15.) Tafasaraka amin’ny andian’ondry angamba ny sasany amin’ireny ondry ireny, ary tsy manompo an’i Jehovah intsony. Inona no hataon’ny anti-panahy miahy ny ondry? Tsy hanao izay rehetra azony atao ve izy mba hitadiavana ny ondry very tsirairay, ary hampirisika azy hiverina ao amin’ny andian’ondry, izany hoe ny fiangonana? Mazava ho azy! Hoy i Jesosy: “Tsy tian’ny Raiko any an-danitra hisy ho very ny iray amin’ireny madinika ireny.”—Mat. 18:12-14.
AZA MIFANTOKA AMIN’NY FAHALEMENY
11. Nahoana no sarotra amin’ny olona sasany ny mankatò ny anti-panahy?
11 Mpiandry lavorary i Jehovah sy Jesosy. Tsy lavorary kosa ireo olona notendreny hikarakara ny fiangonana. Sarotra amin’ny olona sasany àry ny mankatò ny anti-panahy. Mieritreritra angamba izy ireo hoe: ‘Olombelona tsy lavorary hoatra antsika ihany ange ry zareo e! Koa nahoana isika no tsy maintsy mankatò azy?’ Marina fa tsy lavorary ny anti-panahy. Tsy mety anefa raha mifantoka amin’ny fahalemeny sy ny fahadisoany isika.
12, 13. a) Inona no fahadisoana nataon’ny olona sasany nomen’Andriamanitra andraikitra? b) Nahoana no nosoratana tao amin’ny Baiboly ny fahadisoan’ireo lehilahy nanana andraikitra?
12 Voalaza mazava ao amin’ny Soratra Masina ny fahadisoan’ny olona nampiasain’i Jehovah hitarika ny vahoakany fahiny. Voahosotra ho mpanjaka sy mpitarika ny Israely, ohatra, i Davida, nefa resin’ny fakam-panahy ka naka vadin’olona sy namono olona. (2 Sam. 12:7-9) Eritrereto koa ny apostoly Petera. Nanankinana andraikitra lehibe teo anivon’ny fiangonana tamin’ny taonjato voalohany izy, nefa nanao fahadisoana lehibe. (Mat. 16:18, 19; Jaona 13:38; 18:27; Gal. 2:11-14) Tsy nisy olombelona lavorary mihitsy taorian’i Adama sy Eva, afa-tsy i Jesosy.
13 Nahoana no nampanoratin’i Jehovah tao amin’ny Baiboly ny fahadisoan’ireo lehilahy nomeny andraikitra? Maromaro ny antony, fa anisan’izany ny hoe tiany haseho fa afaka mampiasa olona tsy lavorary izy mba hitarihana ny vahoakany. Olona toy izany foana no nampiasainy hatramin’izay. Tsy mety àry ny manakiana an’ireo mitarika antsika na tsy miraharaha ny fahefany, satria hoe manana fahalemena izy ireny. Tian’i Jehovah hanaja sy hankatò an’ireny rahalahy ireny isika.—Vakio ny Eksodosy 16:2, 8.
14, 15. Inona no ianarantsika avy amin’ny fomba nampitan’i Jehovah toromarika tamin’ny vahoakany fahiny?
14 Tena ilaina ny mankatò an’ireo mitarika antsika. Nahoana? Eritrereto ny fomba nampitan’i Jehovah toromarika tamin’ny vahoakany, tao anatin’ny fotoan-tsarotra. I Mosesy sy Arona no nasainy nampita toromarika tamin’ny Israelita, rehefa niala tany Ejipta izy ireo. Nisy sakafo tsy maintsy nokarakarain’izy ireo sy nohaniny, raha tsy te ho faty tamin’ny loza fahafolo izy ireo. Tsy maintsy namono ondry koa izy ireo, ary nanosotra ny rany teo amin’ny tataom-baravarana sy ny tolàna. Tsy nisy feo avy tany an-danitra nilaza an’izany toromarika izany. Tsy maintsy nihaino ny anti-panahy kosa izy ireo, satria nampitain’i Mosesy tamin’ny anti-panahy ny toromarika. (Eks. 12:1-7, 21-23, 29) I Mosesy sy ireo anti-panahy no nitondra ny tenin’i Jehovah. Izany koa no ataon’ny anti-panahy ankehitriny, ary sarobidy ny asan’izy ireo.
15 Angamba ianao mahatadidy tantara maro ao amin’ny Baiboly, izay mampiseho fa nampiasa olona na anjely i Jehovah mba hampitana toromarika mamonjy aina. Nomeny fahefana hiteny tamin’ny anarany ireo iraka nalefany, ka nilaza tamin’ny vahoakany izay tokony hatao raha te ho tafavoaka velona izy ireo. Azo antoka fa hanao toy izany i Jehovah amin’ny Hara-magedona. Mazava ho azy anefa fa mila mitandrina mafy mba tsy hanampatra ny fahefana nomena azy ny anti-panahy, izay misolo tena an’i Jehovah sy ny fandaminany.
“ANDIANY IRAY” SADY “IRAY IHANY NY MPIANDRY”
16. Inona ilay “teny” tokony hankatoavintsika?
16 “Andiany iray” ny vahoakan’i Jehovah, ary “iray ihany ny mpiandry” azy ireo, dia i Jesosy Kristy. (Jaona 10:16) Nilaza i Jesosy fa homba ny mpianany foana izy, “mandra-pahatongan’ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity.” (Mat. 28:20) Efa Mpanjaka any an-danitra izy, ka voafehiny tsara ny zava-mitranga rehetra alohan’ny handringanany ny tontolon’i Satana. Inona no hanampy antsika hiray saina foana sy ho voaro eo anivon’ny andian’ondrin’Andriamanitra? Milaza ny Baiboly fa hisy “teny” hilaza amintsika izay tokony hatao, ary mila mankatò azy io isika. Anisan’io teny io ny hafatra avy amin’ny fanahy masina hita ao amin’ny Baiboly, sy izay lazain’i Jehovah sy Jesosy amin’ny alalan’ireo mpiandry lefitra notendreny.—Vakio ny Isaia 30:21; Apokalypsy 3:22.
Iezahan’ny anti-panahy arovana amin’ny naman-dratsy ireo fianakaviana tsy misy afa-tsy ray na reny (Fehintsoratra 17, 18)
17, 18. a) Inona no loza mety hanjo ny andian’ondry, nefa inona no azontsika antoka? b) Inona no hovelabelarina ao amin’ny lahatsoratra manaraka?
17 Milaza ny Baiboly fa mandehandeha toy “ny liona mierona, mitady olona harapaka” i Satana. (1 Pet. 5:8) Toy ny bibidia mosarena mijoko ny andian’ondry izy, ary vonona handrapaka avy hatrany an’izay varimbariana sy izay tafasaraka amin’ny andiany. Vao mainka àry isika tsy tokony hisaraka amin’ny andian’ondry sy amin’i Jehovah, ilay ‘mpiandry sy mpiandraikitra antsika.’ (1 Pet. 2:25) Hoy ny Apokalypsy 7:17 momba ny olona ho tafavoaka velona amin’ny fahoriana lehibe: ‘Hitarika azy ho any amin’ny loharanon’ny ranon’aina ny Zanak’ondry [Jesosy]’, ary “hofafan’Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin’ny masony.” Tena mahafinaritra ny mieritreritra an’izany!
18 Zava-dehibe tokoa ny asan’ny anti-panahy, izay notendrena ho mpiandry lefitra. Tsara hodinihina koa anefa hoe inona no azon’izy ireo atao mba hikarakarana tsara ny ondrin’i Jesosy. Hovelabelarina ao amin’ny lahatsoratra manaraka izany.